Entana ilaina andavanandro :: Be mpiandry ny tsena mora eny amin’ny fokontany • AoRaha
Olona an-jatony maro no fantatra fa nanjifa entana teny amin’ireo tsena mora isampokontany hatramin’izay. Tsy ny sokajin’olona sahirana intsony anefa no miandrandra ny fiverenan’ny tsena mora, amin’izao fotoana izao, satria betsaka tokoa ireo tokantrano antontonom-pivelomana, izay manantena an’izany noho ny fahaverezana asa tao anatin’ity krizy ara-pahasalamana ity. Tamin’ ny volana avrily no voalaza nisy vary mora farany namidy teny amin’ny fokontany.
“Tena sahirana ny vahoaka. Maro ireo olona tonga eto aminay manontany raha efa tonga ireo entana ilaina andavanandro ireo”, hoy ny avy ao amin’ny fokontanin’Antanimena.
Tsiahivina fa natao hanampiana sy hanalana ny fahasahiranana ny vahoaka ny Tsena Mora. 1 000 ariary ny saran’ny vary iray kilao ary 3 000 ariary ny menaka iray litatra. Fantatra fa nisy fiatoana mihitsy ny fitsinjarana eto Antananarivo noho ny firongatry ny valanaretina Covid-19.
“Tsy ajanona akory ny tsena mora fa eo am-pitadiavana ny lamina sy paik’ady vaovao entina mitsinjara an’ireo entana izahay, ankehitriny, noho ny fiparitahan’ny valanaretina. Efa nivory niaraka tamin’ny Filohan’ny Repoblika izahay mitady ny fomba hanohizana azy. Hanomboka tsy ho ela indray ny tsena mora ary hanaraka ny lamina sy toromarika arapahasalamana napetraky ny fanjakana”, hoy Raheriarimanana Charlie, mpandrindra nasionalin’ny Tsena Mora.
Eto Antananarivo irery kosa no nisy fiatoana fa misokatra hatrany ny any amin’ny faritra sasany efa nisy azy,toa ny any Soalala, Mitsinjo.